Press igwe Manufacturers & Suppliers - China Press igwe Factory
Njirimara njirimara dị iche iche: Isi ike (nrụrụ) 1/6000. Jiri OMPI pneumatic akọrọ ipigide na breeki. Ihe mmịfe ahụ na-anabata ụzọ ntụzi-aka nwere akụkụ isii, ya na ihe mmịfe ahụ na-agbazi "ịgbanye quenching" na "usoro nrịgharị okporo ụzọ", nke nwere obere ejiji, nkenke dị elu, ogologo njigide oge njigide ma melite ndụ ebu. A na-eji crankshaft mee ihe dị ike nke nwere ike dị elu 42CrMo, nke dị okpukpu 1.3 karịa ike ígwè ma nwee ndụ ogologo ndụ. T ...
Performancedị arụmọrụ dị iche iche: Nnukwu ahụ siri ike (nrụrụ) 1/8000: obere nrụrụ na ogologo oge njigide. Jiri pneumatic mgbochi mmiri ipigide breeki, gburugburu ebe obibi-echebe, ọ dịghị mmetọ, ala mkpọtụ, ogologo ọrụ ndụ. Ihe mmịfe ahụ na-ewe ụzọ ụzọ anọ na ụzọ asatọ, nke nwere ike iburu nnukwu ibu eccentric iji hụ na ndozi stampụ na-adịte aka ma kwụsie ike. Ntuziaka ihe ntughari uzo na - anabata “oke onu oku” na “uzo uzo”
Ihe njirimara njirimara: Fuselage nwere oke nkwụsi ike (nrụrụ) 1/15000, obere nrụrụ, ogologo oge njigide oge, oke nkenke nke ngwaahịa stampụ, obere ịmaliteghachi, ma nwee ike ibu nnukwu ibu eccentric. Jiri pneumatic mgbochi mmiri ipigide breeki, gburugburu ebe obibi-echebe, ọ dịghị mmetọ, ala mkpọtụ, ogologo ọrụ ndụ. Ihe mmịfe ahụ na-agbakwụnye ụzọ nkuku anọ na ụzọ asatọ, nke nwere ike iburu nnukwu ibu eccentric: iji hụ na ogologo oge na nkwụsi ike nke stampin ...
Njirimara njirimara nke isi: Nnukwu ikike (nrụrụ) nke ahụ na mmịfe 1/8000: obere nrụrụ na ogologo oge njigide. Jiri pneumatic mgbochi mmiri ipigide breeki (integrated ụdị): gburugburu ebe obibi-echebe, ọ dịghị mmetọ, ala mkpọtụ, ogologo ọrụ ndụ. Ihe mmịfe ahụ na-ewe ụzọ ụzọ anọ na ụzọ asatọ, nke nwere ike iburu nnukwu ibu eccentric iji hụ na ndozi stampụ na-adịte aka ma kwụsie ike. Ntugharị ndu mmịfe na - anabata “oke ọnụọgụ ọkụ” ihe ...
Main arụmọrụ atụmatụ: The fuselage Ọdịdị na-emi esịnede atọ n'akụkụ (n'elu oche + n'etiti n'elu ikpo okwu ahu + isi), na mkwado mmanya na-eji maka ihe siri ike mkpọchi njikọ. High rigidity (deformation) 1/9000 nke fuselage na slide ngọngọ: obere deformation na ogologo nkenke njide oge. The pneumatic mgbochi mmiri ipigide breeki (Integrated ụdị) na-eji maka presses n'okpuru 600 tọn, na akọrọ ipigide ipigide (nkewa ụdị) na-eji maka presses n'elu 800 tọn. The slide ngọngọ adopts nkuku anọ na eig ...
Njirimara arụmọrụ nke mbụ bụ: Adomepụta ọdịdị ahụ dị ike, obere nrụrụ na oke nkenke Ihe mmịfe ahụ na-anakwere ụzọ nduzi ụzọ isii, yana ihe mmịfe ahụ na-agbaso "nkwụsị ọkụ" na "usoro okporo ụzọ": obere ejiji, nkenke dị elu, ogologo oge njigide oge, na ndụ ndụ ka mma. A na-eji crankshaft mee ihe dị ike nke nwere ike dị elu 42CrMo, nke dị okpukpu 1.3 karịa ike ígwè ma nwee ndụ ogologo ndụ. Ọla kọpa ...